जादुई माउस २ र जादुई ट्र्याकप्याड २ रिलिज गरियो आईफोन समाचार
जादुई माउस २, जादुई ट्र्याकप्याड २ र म्याजिक किबोर्ड जारी गरिएको छ
को नवीकरण जादुई ट्र्याकप्याड, जादुई माउस र जादू किबोर्ड एप्पल र तिनीहरू यहाँ छन्। स्पेनमा तिनीहरू मेजिक माउस २ को लागि 89। डलर, नयाँ किबोर्डको लागि १२eर म्याजिक ट्र्याकप्याड २ को १2e यूरोसहित आईपुगेका छन् जसमा म्याकबुक प्रो रेटिना र म्याकबुकको नयाँ फोर्स टच समावेश छ। त्यहाँ कुनै श is्का छैन कि तिनीहरू तपाईको आईम्याकका लागि उत्तम सामानहरू हुन्, तर त्यहाँ केहि पनि छैनन् जसले तिनीहरूलाई कुनै पनि अन्य एप्पल कम्प्युटरमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरे। एप्पलको घोषणा अनुसार, यी सामानहरू नविकरण, क्रान्तिकारी र सबै माथि रिचार्जेबल आइपुगेका छन, हामी बुझ्दैनौं कि एप्पलले यी उपकरणहरूमा यो सम्भावना समावेश गर्न कसरी यती धेरै समय लिन सक्दछ, तर तिनीहरू पहिले नै यहाँ छन् र हामी तपाईंलाई देखाउँदै छौं। आईप्याड समाचारमा सबै समाचार।
यी नयाँ सामानहरू हुन् २०१२ को रूपमा जारी सबै म्याकहरूसँग उपयुक्तयद्यपि यसलाई अघिल्लो म्याकसँग संगत बनाउन सम्भव छ यदि हामी ब्लूटूथ 4.0.० एडेप्टर समावेश गर्दछौं जुन यी नयाँ सामानहरू समावेश ब्लुटुथको प्रकार हो। तिनीहरूसँग एक लाइटनिंग केबल पनि हुनेछ जुन उनीहरूको चार्जिंग विधि मात्र होइन, यी उपकरणहरूले बिजुली जडानको माध्यमबाट पनि काम गर्दछ र यसले उनीहरूको कन्फिगरेसनलाई सजिलो बनाउँदछ, केवल पहिलो केबल जडानको साथ हामी परिपूर्ण र छिटो पेयरि obtain प्राप्त गर्छौं।
सधैँ जस्तै, यी नयाँ सामानहरू अब देखि बेचेको हरेक iMac मा समावेश गरिनेछ। यदि होईन भने, मूल्य कुनै पनि आकर्षक छैन, तर यसको पूर्ण अनुकूलता र डिजाइन पक्कै तपाईंलाई यसको बारेमा सोच्न बाध्य पार्छ।
1 जादू माउस 2
2 जादू कीबोर्ड
3 जादुई ट्र्याकप्याड १
सतही रूपमा भिन्नताहरू अवलोकन गर्न योग्य छैनन्, यद्यपि यो तल हो जहाँ हामी तिनीहरूलाई कदर गर्न सक्छौं, नयाँ म्याजिक माउस २ को कभर छैन, किनकि यसमा ब्याट्रीहरू आवश्यक छैन, त्यसैले बेस बढी ठोस हो, र जहाँ कभर खोल्ने बटन थियो। अवस्थित छ। अब हामी बिजुली चार्ज गर्ने कनेक्शन पाउँदछौं। यसको वजन १०० ग्राम जति छ र एप्पलले यसमा आश्वासन दिएका छन् दुई मिनेट चार्जको साथ हामीसँग of घण्टा प्रयोगको लागि पर्याप्त हुनेछ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
नयाँ जादुई माउस २ सतहमा सजिलैसँग ग्लाइड गर्दछ सामग्रीको परिवर्तनका कारण, ती सबै प्रकारका माध्यमबाट, चाहे हामी यसलाई काठको टेबुलमा प्रयोग गर्‍यौं वा साधारण माउस प्याडमा। पहिले जस्तो यो मैजिक माउस २ मल्टि-टच हो र हामी यसमार्फत नेभिगेट गर्न विभिन्न इशाराहरू प्रयोग गर्न सक्छौं। स्पेनिश एप्पल स्टोरमा यसको मूल्य € is छ।
पुरानो किबोर्डको समानता प्रस्ताव गर्न अपरिहार्य छ, नयाँ कुञ्जीपाटीले प्लास्टिकको आधार र एक कुञ्जीमा हल्का खैरो पाठको साथ एल्युमिनियम चेसिस राख्दछ, जुन अघिल्लो संस्करण भन्दा पनि स्पष्ट छ। किबोर्ड अब सानो र स्लिमर भएको छ कि यसलाई ब्याट्री सेक्सनको आवश्यकता पर्दैन, यो रिचार्जेबल पनि छ। कुञ्जीहरूको लेआउट र तिनीहरूको आकार म्याकबुक प्रो वा म्याकबुक एयर किबोर्डको धेरै सम्झना दिलाउँदछ।
बिजुली पोर्ट यो समय हामी यसलाई अगाडिको मध्यमा फेला पार्दछौं र यो कसरी कम हुन सक्छ, टाइपोग्राफी परिवर्तन भयो नयाँ "स्यान फ्रान्सिस्को" सबै एप्पल प्रणालीहरू अनुसार प्रस्ताव गर्न। धेरै कुञ्जीहरू आकारमा ठूलो विस्तार गरिएको छ, जसले यसले अझ बढी आरामदायी बनाउँदछ, जे होस्, यदि तपाईंलाई म्याकबुक किबोर्डमा ढाँचाइएको छैन भने यसले तपाईंलाई केही खर्च गर्न सक्दछ। किबोर्ड ११ ur यूरोबाट स्पेनिश अनुप्रयोग स्टोरमा छ, एकदम विचारणीय मूल्य।
जादुई ट्र्याकप्याड १
ब्याट्रीको अभाव रहेको अर्को उपकरणमा अब फ्ल्याट बेस छ, यस पटक एप्पलले सेतो "रंग" गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, जुन धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि सफाइको समस्याका कारण अप्रिय हुने छ, यद्यपि यो स्वीकार्नुपर्दछ कि यो उपकरण नै बढी हो। अघिल्लो संस्करणको तुलनामा डिजाइनमा सुधार गरियो। यो कसरी कम हुन सक्छ फोर्स टच टेक्नोलोजी थप गर्दछ जुन हामी म्याकबुक प्रो रेटिनामा र म्याकबुकमा पाउँछौं।
फोर्सटचको फाइदा भनेको यो हो कि मेजिक ट्र्याकप्याड2को तल ट्याप गर्नु भनेको माथि ट्याप गर्नु जत्तिकै सजिलो र चिल्लो हुन्छ, यसले केहि प्रयोगको लागि लिन्छ तर तपाईं निर्भर बन्नुहुन्छ। थप रूपमा, दबाबद्वारा डबल टचले हामीलाई नयाँ द्रुत प्रकार्यहरूको आनन्द लिन मद्दत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » जादुई माउस २, जादुई ट्र्याकप्याड २ र म्याजिक किबोर्ड जारी गरिएको छ
राम्रो किबोर्ड तर यो उस्तै हो। म यसलाई महँगो देख्छु, ताकि ब्याकलिट हुन सक्दैन।
Aitor Aleixandre Badenes भन्यो
न बैकलिट न त संख्यात्मक किबोर्डको साथ ...। निराशाजनक
Aitor Aleixandre Badenes लाई जवाफ दिनुहोस्
उस्तै र ब्याकलाइट के अधिक ?? के तिनीहरूले अर्को दिनको लागि छोडे? ... अर्को अपडेटको लागि हामीले अर्को6बर्ष प्रतिक्षा गर्नुपर्दा, हामी स्पष्ट छौं। धेरै निराशाजनक ... केवल तिनीहरू जुन तिनीहरूमा ठूलो भएका छन् मूल्य बढाउने; खैर, त्यो उनीहरूले गरेको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भएको छ। कुनै शाफ्टविना किबोर्ड प्रकार "ल्यापटप" को लागी € ११ pay तिर्नु हास्यास्पद देखिन्छ, जहाँ किबोर्ड र टाइप गरेर खुशी छ किबोर्ड। लगभग कुनै पनि मेकानिकल किबोर्ड, एक प्लास्टिकको पनि, तपाईंलाई एक राम्रो रिफ्रेसर दिनेछ। यो मसँग अहिले आईमाकको साथ हुन्छ जुन म घरमा छ, जब म काममा छु म चेरी एमएक्स रेड स्विचको साथ मेकानिकल प्लास्टिकको प्रयोग गर्दछु र यसले म्याजिक किबोर्डलाई एक हजार पटक लात लिन्छ। त्यो मलाई टाँस्छ र सबैभन्दा खराब कुरा भनेको ती दुई बिचको मूल्य भिन्नता न्यूनतम हो। कहिलेकाँही डिजाइन सबै कुरा हुँदैन, दूध, धेरै राम्रो र बहुमूल्य तर व्यावहारिक रूपमा तिनीहरू कागजका प्रकाशका रूपमा काम गर्छन्।
उनीहरूले राम्रोसँग टच आईडीको साथ कुञ्जीपाटी बनाएको छ, म हरेक चोटि पासवर्ड प्रविष्ट गर्दा थोरै आईक क्लाउडमा सोध्छु र अनुप्रयोगहरू किन्नको लागि।
स्टीव जॉब्सले वोज्नियाकलाई आफ्नो अन्तिम दिनहरूमा एप्पलमा फर्कन आमन्त्रित गरे
स्पेनमा नयाँ आईओएस News न्यूज अनुप्रयोग कसरी सक्रिय गर्ने